Ukuwa kweGuy Guys ats Ukukopela, iAimbot, i-ESP, iWallhack- iGamepron
Yiba ngukumkani ophikisayo umdlalo odume kakhulu wehlobo lowe-2020! Sebenzisa ii-FallGuys Hoplit zemidlalo yethu ukuphumelela imidlalo emininzi ngendlela othanda ngayo.
Sele uthenge i-FallGuys Hack? Fumana amanyathelo alandelayo apha
Nceda uqaphele: Ngaphambi kokuba uthenge ii-FallGuys hacks zethu, qiniseka ukuba isixhobo ojonge ukusithenga sihlaziyiwe kutshanje okanye sisekwi-intanethi. Ngelixa sihlala sihlaziya izixhobo zethu, kukho ukulibaziseka ngexesha lokuhambisa kwezinye iimeko; Ngelixa ihlala ikhawuleza, inokuthatha iiyure ezimbalwa. Zonke izixhobo zethu zitshixiwe nge-HWID, oko kuthetha ukuba ungazisebenzisa kwikhompyuter enye-qiniseka ukuba ikhompyuter yakho iyahambelana nazo zonke izixhobo zethu kwangaphambi koko. Akukho mbuyiselo iya kunikwa wakube UKUJONGE isitshixo semveliso!
Onyuliweyo wethu Ukuwa Hacks
I-FallGuys Hacks, i-Aimbot, i-Norecoil, i-ESP, iWall Hacks kunye nokunye
Thenga Ukuwa IiHacks ngaphakathi 4 amanyathelo
Khetha ukhetho lweGuy Guys kuluhlu lwethu olukhulu lwemidlalo apha kwiGamepron
Khetha zonke ii-hacks kunye neempawu ezihambelana neemfuno zakho kunye nentloko kwinyathelo elilandelayo
Yenza intlawulo yakho ye-FallGuys hack usebenzisa i-100% iprosesa yentlawulo ekhuselekileyo
Ngoku ukuba unesitshixo semveliso, fikelela, kwaye ukhuphele i-FallGuys Hoplit hack!
Kutheni i-Gamepron FallGuys hacks?
I-Fall Guys ngumdlalo ekufanele ukuba udlalwe ngokuzonwabisa engqondweni, kodwa nanini na xa kukho imali enokufunyanwa kumdlalo, kuya kubakho abadlali phaya ngaphandle abaya kubhenela kwi-META (Eyona ndlela isebenzayo kwiAround) . Ngelixa le ayisiyiyo ngqo into kwi-Fall Guys, kukho izinto ezininzi onokuzenza ukunceda ukwandisa amathuba okuphumelela! Ngelixa kuyinyani, ekuphela kwento ekufuneka uyizamile kukusebenzisa ii-fall Guy's hacks ukufumana ithuba ngaphezulu kweentshaba zakho. Ngelixa ingelulo uhlobo lwesiko lomdlalo oza kusebenzisa ii-hacks kuwo, kusekho indawo eninzi oza kusebenza nayo xa kufikwa kwindawo yokuqhekeza. Siqinisekile ukuba uzibonile iividiyo zabakhohlisi bakaFar Guy abhabha emoyeni kwaye bafumane ukuphumelela kwangoko, kwaye ngelixa abanye abantu beyithiyile, ungangulo mntu!
I-Fall Guys ngumdlalo osekwe kungqubano osebenzise i-physics, oko kuthetha ukuba uhlala ulwa ngokuchasene nezinto ngelixa udlala. Ungaphelela ekuphumeleleni yonke loo nto ngenxa yesiphithiphithi, okanye "ubuchule" bendlela yakho yokuphumelela ngelixa udlala i-Hex-a-gone - ukhetho lubonakala ngathi alunakuphela kumdlalo wesiphithiphithi! Xa kufuneka ukhathazeke ngokungqubana nabanye abadlali, unokusebenzisa nje i-FallGuys Hoplit hack kwaye ukhubaze ukungqubana ngokupheleleyo. Ungabaleka ujonge njengenkuku enqunyulwe intloko kwaye usenokuphumelela, kuba akukho mntu uya kukulahla endleleni.
Enye into ekufuneka uyiqwalasele iya kuba yinto entsha kunye ephuculweyo "yeFly Mod" ethe yaziswa kwi-FallGuys Hoplit hack yethu. Ungabhabha esibhakabhakeni unxibe njengayo nayiphi na into onokuyithanda kwiiFall Guys, oko kuthetha ukuba akukho nto inokukuthintela ukuba ungaziphathi (kwaye ngamanye amaxesha, iqela lakho) ukuze uphumelele. Ukufumana iqela elibi kwiBhola yokuwa kuyadinisa, kodwa ungasebenzisa i-FallGuys Hoplit ye-hack yokuphumelela ngaphandle kwayo!
Isantya esigqithileyo kukhuphiswano ngokunjalo, njengoko kukho imowudi yokunyusa isantya eya kuqinisekisa ukuba ufika apho phambi kwakhe nawuphi na umntu. Ukuba ukwintaba yokuwa okanye nayiphi na into eza kuvuza okona mdlali ukhawulezayo, iya kuba yinto eluncedo kakhulu ukuba uyisebenzise. Nokuba yeyiphi na okhangele ukuyiphumeza ngelixa udlala iiGuy Guys, sinokukunceda uyifeze apha kwiGamepron.
UmGwebi woMdlali we-ESP
I-FallGuys Khubaza ukungqubana.
Iziphumo zokuwa kweGuyGuys
Imowudi yokuwa kweFuyGuys
Ukukhulisa isantya sokuKhulisa
Ngokufanelekileyo Ukuwa yimfumba Iimbonakalo
Sebenzisa i-FallGuys udonga lokuqhekeza eludongeni kukunika ukufikelela kukhetho lwe-ESP (Ukuqonda okungakumbi kokuqonda), zonke eziya kukuvumela ukuba uhambe kwimephu ngokulula.
Ulwazi lomdlali we-FallGuy ESP (igama, umgama)
Ukubhengeza abantu ababaleka nawe kuhlala kufanelekile, nangona ngamanye amaxesha banokufihlwa. Ungaze uphinde ubonwe ungaboni kwakhona usebenzisa obu buqhetseba.
Into ye-FallGuys ESP eneefilitha
Ungayibona yonke imiqobo eyahlukeneyo kunye neengxaki ezinokuthi zime endleleni yakho, konke okufuneka ukwenze kukuvumela i-Item ESP ngezihluzi.
Ngelixa kungekho "aimbot" yemveli ekhoyo kwesi sixhobo, usengayisebenzisa ngelixa ubhabha ukuqinisekisa impumelelo (nokuba udlala eyiphi na ikhosi).
Umkhondo we-FallGuys Hoplit Bullet
Akukho ndlela yokulandelela iimbumbulu ngaphakathi kwe-FallGuys Hoplit Aimbot, nangona usenokulandela umkhondo weendlela zomdlali ngamanye amaxesha (njengeTip Toe).
Ngaba lukhona utshaba oluza emva kwakho? Akukho sidingo sokukhathazeka, njengoko i-FallGuys Hoplit hack inezilumkiso zotshaba (izilumkiso zengozi) kwimeko nje.
I-FallGuys Hoplit imo yokutsiba ephezulu (akukho monakalo wokuwa xa uyenzileyo)
Imowudi yokutsiba okuhle ihlala itshintsha umdlalo, kodwa akukho monakalo uwayo kulo mdlalo. Ungayisebenzisa nje ukuya phambili!
Ukuwa kwamathambo kunye nenjongo ephambili enokuqwalaselwa
Ukubona ukuba akukho i-aimbot ngaphakathi kwesixhobo se-FallGuys Hoplit, akukho zicwangciso zinokuqwalaselwa ze-aimbot. Zininzi ezinye izinto eziluncedo!
I-FallGuys iitshekhi ezibonakalayo ezibonakalayo
Ukutshekisha okubonakalayo kuhlala kugcinelwe imidlalo ebonisa ukudubula kunye nokusetyenziswa okubalaseleyo kwe-aimbot, engafumanekiyo xa usebenzisa i-FallGuys Hoplit Hack.
I-FallGuys Hoplit iphinda ibuyise imbuyekezo
Ukubuyisa imbuyekezo kuyimfuneko kuphela xa udlala umdlalo wokudubula, ke ngelixa ungawusebenzisi ngokwesiko, ungayisebenzisa ngokwahlukileyo ngeGuy Guys.
I-Fall Guys ayingomdlalo okhuphisana kakhulu ukuba uthathele ingqalelo ukungena ngaphakathi, kodwa kukho imvakalelo eyodwa efumanekayo xa befumana izandla zabo kuloo "Crown" inqabileyo. Lungisa useto lwesantya sakho ukuze uvuthele kude ukhuphiswano, nokuba "banezakhono" kangakanani kubugcisa beGuy Guys - akukho mntu uya kukhawuleza okanye abhabhe phezulu kangangoko unako nokukhohlisa. Qalisa namhlanje ngokuthenga isitshixo
Ukuwa okuDumileyo iiHacks kunye nokukhohlisa
I-FallGuys ESP kunye neWallhack
Ezinye ii-FallGuys iiHacks kunye nokukhohlisa
I-Fall Guys ngokuqinisekileyo ibetha ihlobo, kuba akukho mntu unokuphepha ukubuzwa malunga nokuba zingaphi izithsaba ababenazo iinyanga ezimbalwa. Ngelixa abanye besithi i-buzz isweleke kancinci, kusekho izigidi zabadlali abazinikezele ekufakeni izandla zabo kuloo golide! Ungasebenzisa izithsaba oziwinileyo ukwenza ukuthengwa kwezithambiso ezikumdlalo weqonga, ezinye zazo ezinokuthengwa kuphela ngeeNkontsho. Oku kuthetha ukuba ngekhe uthenge indlela yakho eya "kwizinto ezilungileyo", kwaye ekuphela kwendlela yokuzifumana kukubonisa izakhono zakho kwi-Intanethi!
Siza kuthathwa njengoyena mboneleli uthandwayo wee-Guys hacks ngenxa yomgangatho wezixhobo zethu, kodwa ayisiyiyo kuphela loo nto. Abasebenzisi bethu baqaphele ukuba sinikezela ezona zixhobo zibiza kakhulu xa kufikwa "kwiinkonzo zepremiyamu", kwaye inyani yokuba iGamepron ithathwa njengepremiyamu kuthetha ukuba senza into elungileyo! Sijoyine namhlanje kwaye uve oko sinokukunikela.
Ngelixa sithe ukusebenzisa i-Fall Guys Aimbot akuyomfuneko, kukho ezinye izinto ezininzi ezibandakanyiweyo ngaphakathi kwesi sikrelemnqa esiza kuphumelela umoya. Ngokwesiko, unokulindela ukufumana i-aimbot enamandla ebandakanyiweyo kuninzi lokukhululwa kwethu-oku kungenxa yokuba sigubungela imidlalo emininzi yokudubula. Kukho iimeko ezimbalwa apho ukusebenzisa i-aimbot kungangqineka kuluncedo kwisihloko esingadubuliyo, kwaye oku kunokuba sesinye sazo! Ayizukukwazi kuphela ukukhomba apho uyityhala khona ibhola, kodwa unokukhetha nokutshixa nakwabanye abadlali.
Ukubanakho ukubetha ekujolise kuko kwi-Fall Guys isenokungabi ngumtshintshi womdlalo, kodwa inokuba sisizathu sokuba uphumelele umdlalo othile. Sisoloko sifuna ukuba abathengi bethu babe nezinto ezininzi abanokusebenza nazo ngokusemandleni, kwaye i-FallGuys Hoplit hack yethu ayizukuhluka!
Sebenzisa i-ESP okanye iWallhack kwi-Fall Guys isenokungabonakali ilungile kwabanye, kodwa kukho iindawo ngokuqinisekileyo apho uya kuba nakho ukuyisebenzisa ngokulula. Nokuba kukubona izithintelo ezinokubakho ezinokuphazamiseka kwimbono yakho okanye ufumanise ukuba umntu uhleli ekugqibeleni njengomgibe, ukusebenzisa i-FallGuys Hoplit ESP kunye neWallhack kuqinisekisiwe ukunceda. Awudingi kuba nexhala malunga nokuba ibhanana engakhethiyo ikukhupha nayo, njengoko uya kuba nakho ukubona into ye-ESP ngaphambi kokuba idlale.
Ngaba ufuna ukufumana amandla amaninzi kunokuba wawunethemba lokufezekisa kwi-Fall Guys? Ungazimela kwaye ubaleke ngezona zilungileyo kuzo usebenzisa i-ESP kunye neWallhack, yinto nje yokuba wonwabe ngesixhobo. Zonke izixhobo zethu kulula ukuzifaka kwaye kube lula ukuzuza kuzo, ke ulinde ntoni? Thenga isitshixo semveliso namhlanje kwaye masiqale.
Isantya siyabulala kwi-Fall Guys, yiyo loo nto umntu okhawulezayo ehlala eyiphumelela yonke. Xa unokuyiphepha yonke imiqobo ezayo kwaye ucofe indlela yakho de ugqibe, uza kuza kwindawo yokuqala phantse ngalo lonke ixesha! Ukubaluleka kwesantya sethu sokukhahlela akunakucinezeleka ngokwaneleyo, ngakumbi xa ucinga ngento yokuba yeyomntu ngokupheleleyo. Ulawula ipesenti yesantya oya kuthi ukonyuswe ngaso, ke unokukhetha ukusenza sibe nobuqili, okanye ungabavuthela abachasi bakho emanzini! Akukho mntu uya kukubetha kwi-Fall Guys kwakhona ukuba une-FallGuys Hoplit yokuqhekeza isebenze.
Inokuba ngumahluko wee-intshi ukuphela komdlalo kwii-Fall Guys, ke isantya siya kuba yeyona nto ibalulekileyo ekufuneka siqwalasele ukuphucula kuyo. Khawulezisa iiGuys zakho ezibalekayo nge Gamepron!
Kukho ezinye izinto ezimbini ezinkulu ezibandakanyiweyo phakathi kweHackGuys Hoplit hack, ezo ziMo Fly Mod kunye nokususwa kwengozi. Awunyanzelekanga ukuba ubhekane nokudibana okungahleliwe ukukunceda uphumelele kwakhona, njengoko unokubhabhela phezulu ngaphezulu kwemephu kwaye uphephe yonke loo migibe. Injongo yalo mdlalo kukuqhuba ikhosi yezithintelo ngokukhawuleza, kwaye ukubhabha kuyo (ngokoqobo!) Yeyona ndlela icacileyo yokusondela kwizinto. Ngelixa abasebenzisi abaqhelekileyo bengazukukwenza ukuba kusebenze iModyuli yokubhabha kwaye weqe inqanaba liphela, yile nto kanye enokwenziwa ngabasebenzisi beGamepron.
Inqaku lokususa ukungqubana yenye indlela emangalisayo, kuba oko kuthetha ukuba akukho mntu unokukwenza buhlungu! Ukuba umntu uye wabona ukuba uyanyusa isantya kwaye ufuna ukukuyekisa ekuphumeleleni, ngekhe-nokuba amaqhuqhuva ngempazamo ayinto yakudala xa usebenzisa i-FallGuys Hoplit hack. Akukho zinto zingcono zokuwa kwabafana ngaphandle, siyathembisa.
Ukuwa kweHacks imibuzo
Kutheni ii-FallGuys zethu zeHacks
IiHacks zethu azizukuyeka phantsi nje emva kokuba uzikhuphele. Apho ezinye ii-Fall Guys cheats zisilela khona, siyachuma kwaye sinike abasebenzisi bethu iifayile ze
Amava asemagqabini. Sukuchitha imali yakho naphina kwaye uthenge ukukopela kowona mthombo unokuthenjwa kwi-intanethi! I-Gamepron inikezelwe ukukhulula (kwaye okona kubaluleke kakhulu, kuhlaziywa) izixhobo ezikumgangatho ophezulu kwiminyaka ngoku.
Kutheni ii-FallGuys zethu zeAimbot
I-FallGuys Hoplit Aimbot yethu iya kukunceda ufezekise ubukhulu ngokukuvumela ukuba ugxile kumvuzo osele ukufumene. Awuyi kuphazamiseka naziphi na iingxaki zangaphandle, njengabanye abadlali abangena endleleni yakho, kuba i-Gameprons 'Fall Guys Aimbot ichanekile njengoko isiza. Nokuba ilahlekile kwisithsaba ekugqibeleni okanye ingxaki nje ngokubanzi, olu khetho luya kunceda.
Kutheni ii-FallGuys zethu ze-ESP
I-ESP (Ukuqonda okungakumbi kokuqonda) ilungele abantu abanengxaki yokubona imiqobo efihliweyo okanye iintshaba. Xa abantu besendleleni yakho kodwa bengabonwa, kunokuba nzima ukubona into oyenzayo engalunganga; Ngombulelo, ukusebenzisa i-FallGuys Hoplit ESP iya kutyhila ilizwe liphela lolwazi. Ungabona apho bakhoyo abadlali, kunye namagama abo!
Kutheni i-FallGuys Hoplit Wallhack yethu
IiWallhacks zilunge kakhulu kwimidlalo efuna ukudubula, akunjalo? Ewe ungayisebenzisa kwi-Fall Guys ukubona izithintelo ezigutyungelwe yimimandla eqinileyo, kunye nabadlali-abagqibeleleyo xa udlala iTag Tag, Jump Showdown, okanye ezinye izifundo ezininzi ngaphakathi kweGuy Guys. Ukuphumelela ngokusekwe kwithamsanqa kuphela akulunganga kwi-Fall Guys, kodwa ukusebenzisa izixhobo zethu kunokunceda ngayo nantoni na.
Kutheni iModGuys yethu iFly Mod
Usebenzisa i-FallGuys Hoplit hack iya kukunika ukufikelela kwiMod Fly Mod yakho ekhethekileyo, ekunika amandla okubhabha esibhakabhakeni njengentaka. I-Fall Guys yenzelwe ukuba ibe ngumdlalo osekwe emhlabeni apho uphuthaphutha khona njengesidenge, kodwa unokwenza iFly Mod yethu ibhabhe ngaphezulu kokhuphiswano! Iimpumelelo azikaze zibe lula ukufikelela kule Guys.
Ungazikhuphela njani ezona hacks zilungileyo zeGuyGuys?
Unokuzikhuphelela ezona zinto ziwayo zeGuy Guys Hoplit kanye apha, njengoko siyenzile le nkqubo njengesiseko ngokusemandleni. Abasebenzisi beGamepron akufuneki ukuba batsibe iihupula zokukhuphela kunye nokufaka iiHackGuys Hoplit zethu; ungasebenzisa nje i-Gamepron Load / Injector ukukhuphela kunye nokufaka zonke izixhobo zethu kwikhompyuter yakho ngokulula. Ngamanye amaxesha indlela elula yeyona ndlela ilungileyo xa ukhuphela iihacks!
Kutheni le nto ii-FallGuys zakho zibiza kakhulu kunezinye?
Zonke izixhobo zethu zi-100% ezingafumanekiyo kwaye ziya kugcina iiakhawunti zakho zikhuselekile ngelixa ukopa, sesinye sezizathu zokuba kutheni kufuneka sibize ixabiso le "premium" kwiimveliso zethu. Kukho inani eliqingqiweyo leendawo ezikhoyo ezikhoyo kwisixhobo ngasinye, oko kuthetha ukuba sinokusebenzela kuphela inani elithile labasebenzisi nangaliphi na ixesha elinikiweyo. Ukukopela kwi-Guys yokuwa usebenzisa i-Gamepron!
Sinikezela ixesha elibekiweyo nelifanele nabani na. Zonke iindlela zobomi zifanelwe kukufikelela, yiyo loo nto i-FallGuys Hoplit hack inokufumaneka kwi-1-Day, 1-Week, and 1-Month Month key key. Ukuba uthenge isitshixo soSuku olu-1 kwaye ufuna ixesha elingakumbi lokusebenza, unokuthenga nje esinye isitshixo semveliso kwaye ugcine amaxesha okonwaba eqengqeleka.
Kuhle Ukuwa yimfumba Iimbonakalo